Yazvino mamiriro ekunze kweChina nekutengesa kunze
Mukota yekutanga ya2020, kupinzwa kwenyika yangu uye kunze kwenyika zvakadonha ne6.4%, iyo yaive yakadzikira zvakanyanya ne3.1 muzana poindi kubva mumwedzi miviri yapfuura. Muna Kubvumbi, huwandu hwakazara hwekukura kwekushambadzira kwekunze hwakadzokororwa ne5.7 muzana poindi kubva kukota yekutanga, uye kukura r ...
Iko kushandiswa uye chengetedzo ye [bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)]
[Bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)], dichloroethyl ether inonyanya kushandiswa semakemikari ari pakati kugadzirwa kwemishonga yezvipembenene, asi dzimwe nguva inogona kushandiswa seye solvent uye yekuchenesa mumiririri. Zvinogumbura ganda, maziso, mhuno, huro nemapapu uye zvinokonzeresa kusagadzikana. 1. Ho ...
Kambani yedu yakagamuchira kubvunzana neCCTV's "Brand Power" chirongwa chekubvunzurudza.
Muna Kurume 2016, kambani yedu yakagamuchira bvunzurudzo neCCTV's "Brand Power" chirongwa chekubvunzurudza. Iyi bvunzurudzo yakaitirwa neakakurumbira CCTV anotungamira Wang Xiaoqian, uye akaunza iyo kambani yekuvandudza uzivi uye maitiro ebasa. Shijiazhuang Chenghexin Chemical Co, Ltd ...